बजारमा मारुती सिमेन्टले इन्जोय गरिरहेको छ : टोपलाल पन्थी, बजार निर्देशक , मारुती सिमेन्ट « News24 : Premium News Channel
स्वदेशी सिमेन्ट उद्योगहरुले नेपालमा पनि सिमेन्टले आत्मनिर्भरता कायम गर्न सक्यो भनिरहेको अवस्थामा अझैपनि नेपाली सिमेन्टको गुणस्तरमा भने प्रश्न चिह्न उठिन नै रहेको छ । त्यसो त विभिन्न निर्माण कार्यको काम विग्रेमा सुरुमा नै गुणस्तरहिन सिमेन्ट भन्ने अपजस सिमेन्ट उद्योगहरुलाई लाग्ने गरेको छ । तर नेपाली सिमेन्ट उद्योगीहरुले पनि गुणस्तरमा कुनै विदेशी सिमेन्टभन्दाकम नरहेको दाबीगर्दै आएका छन् । अझ स्वदेशी सिमेन्ट उद्योगले त कच्चा पदार्थ गुणस्तरीय भएकाले विदेशी भन्दा अझै राम्रो र नेपालको चुनढुंगागुण स्तरीय रहेको बताएका छन् ।
कोरोनाले सिमन्टको उद्योगलाई खासै असर पारेको छैन । विश्वभरी माहामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसका संगै सरकारले त्यसको नियन्त्रणका लागि गरेको लकडाउनका कारण अन्य क्षेत्रमा जस्तो दीर्घकालीन असर सिमेन्ट उद्योगहरुमा पारेको छैन । केही हद सम्म तत्कालीन अवस्थामा असर गरेको भएपनि सिंगो सिमेन्ट उद्योग र बजार चलायमान अवस्थामा रहेको छ । सिमेन्टको मूल्यमा गिरावट आएको भए पनि खासै असर पारेकाे छैन । मूल्य गिरावटमा पनि लकडाउन र कोरोनालाई मात्र दोष दिन नमिल्ने बताउनुहुन्छ । न्यूज २४ नेपाल डट टिभीका लागि कृष्णकुमारी चौलागाईले मारुती सिमेन्टका बजार निर्देशक टोपलाल पन्थी गरेको कुराकानी ।
सिमेन्टमाआत्मनिर्भर भयो भनिन्छ, के नेपालको सिमेन्टमा परनिर्भरता टुटेको हो ?
निश्चय ने । हामी सिमेन्टमा आत्मनिर्भर भइसकेका छौँ । तर परनिर्भता टुटेको छैन । विशेषगरी ठूलठूला परियोजनाहरुमा बाहिरी सिमेन्ट अहिले पनि आइरहेको छ । परनिर्भरता र आयातलाई कमगर्नका लागि गुणस्तरमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । तर सिमेन्टका गूणस्तरको असंगति रहेको छ । त्यसको कारण सिमेन्टको मूख्य ‘रअ म्याटेलियल‘ क्लिङ्कर हो तर क्लिङ्करको क्वालिटीमा समनाता नहुनु पनि हो । जसले गर्दा नेपाली सिमेन्टले आयातलाई रोक्न सकिरहेको छैन ।
परनिर्भरताकायम रहनुमाअझैपनि नेपालको प्रोडक्टलाई अविश्वास गर्नु हो ?
उपभोक्ताको सिमेन्टप्रतिको जागरुकताल्याउनमूख्य कुरा हो । नेपालमाउपभोक्तासिमेन्टप्रतिको अवरनेस अझैपनि छैन । सिमेन्ट किन्दा वा बिक्रि गर्दा गुणस्तर के हो, त्यसमा के के प्रयोग हुन्छ कुन राम्रो कुन नराम्रो भन्दा पनि नेपाली सिमेन्ट बजारमा सिमेन्ट विक्रेताहरुले नेगेटिभ प्राइसिङले पनि प्रभाव पारेको हो । गुणस्तर भन्दा पनि मूल्यलाई र उपभोक्ता आफ्नो हातापार्ने परिपाटीले परनिर्भरता कायम रहेको पाइन्छ ।
मारुती सिमेन्टको बजार कस्तो छ ?
बजारमा सिमेन्टको माग बढ्दै गएको छ । बजार धेरै राम्रो छ । फुल फेजमा प्रडक्सन छ र फल पेजमा सेल्स छ । बजारमा त्यस्तो समस्या छैन । बजारसंग मारुती सिमेन्टले इन्जोय गरिरहेको छ ।
मारुतीले उपभोक्ताको विश्वास जित्ने गरी उत्पादनमा गुणस्तरलाई ध्यान दिएको छ ?
सिमेन्ट उद्योग कुनै पनि प्रडक्टको लाइफ साइड बेस मानेर कुरा गर्ने हो भने सिमेन्ट प्रक्डक्ट अहिले पनि इन्टरडक्सन फेजमा नै छ । जहाँसम्म गुणस्तरको कुरा छ, हामीले प्रयोग गर्ने कच्चापदार्थ गुणस्तरीय भएकाले विदेशी भन्दा अझै राम्रो छ। यहाँका उद्योगले विश्वकै नयाँ प्रविधि प्रयोग गरेको छ। नेपालको चुनढुंगा गुणस्तरीय छ। जसले गर्दा पनि उपभोक्ताको आकर्षणको रुपममा मारुतीलाई लिइन्छ ।
मारुती सिमेन्टको बजार समग्र मुलुकभर कस्तो छ ?
मारुती सिमेन्ट मात्र नभएर यसको भोलुमको कारण र हरेक सिमेन्टको विशिष्ट एरियाहरु छन् । यातायातलागत धेरै हुने भएकोले पनि धेरै जस्तो उपभोक्ताहरुले आफुलाई पायक पर्ने सिमन्ट प्रयोग गरेका हुन्छन । हामी सबै ठाँउमा उपलब्ध हुन गाह्रो हुन्छ ।
सिमेन्ट उद्योगका लागि सरकारको नीति कत्तिको सहयोगी छ ? के सरकारले सिमेन्ट उद्योगमा लिएको नीतिमा परिवर्तन गर्न आवश्यक देख्नु हुन्छ?
सरकार भनेको विजनेसका लागि एक अभिभावक हो । जब सम्म आफ्नो अभिभावकको इच्छा पूरा गर्दैनौँ तब सम्म अभिभावकले पनि सुरक्षा दिन जरुरी छैन । सुरुमा त हामीले नै सरकारको नीति तथा नियमहरु पछ्याउनु पर्यो । सरकार र विजनेश बीचको पारस्परिक सम्बन्ध रहेको हुन्छ विजनेश अर्गनाइजेशनको अभिभाकत्व सरकारले गरेको नै हुन्छ । नेपालको परिपेक्ष्यमा धेरै सुविधाहरु दिइरहेको हुन्छ । सरकारको पनि समस्या पनि बुझुन पर्ने हुन्छ ।
सिमेन्टमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा छ त ?
उपभोक्ताको जारुकता, बानी,लिभिङ स्डार्डड र हाम्रो कल्चरले गर्दा स्वच्छ प्रतिश्पर्धामा सिमेन्ट कम्पनीहरु बस्नको लागि कठिन भएको छ । सिमेन्टको स्वस्च्छ प्रतिस्पर्धा नहुनुमा हाम्रो समाज, सोचाई र बुझ्ने तरिकाले गर्दा जटिल भएको छ ।
सिमेन्टमा पछिल्लो समय प्रतिष्पर्धा बढेको हो ?
हो, पक्कै पनि पछिल्लो समय निर्माणका कामहरु बढ्दा बजारमा सिमेन्टको माग पनि बढिरहेको छ । पछिल्लो ४ वर्षमा २०० मेट्रिकट्रन बढी क्यापासिटी बढेको छ । जस अनुसार नयाँनयाँउद्योग बढेका छन् ।
मारुती सिमेन्टले उपभोक्तालाई आफ्नो उत्पादनको तर्फबाट दिएको सबैभन्दा ठ्रलो गुण के हो त ?
अरु सिमेन्टको तुलनामा मारुती सिमेन्टको कन्सिसटेन्सी धैरै राम्रो छ र अर्को यस्को क्वालिटी हो । सिमेन्टमा प्रयोग हुने कच्चा पर्दाथ राम्रो छ । लेटेस्ट र हाइटेक टेक्नोलोजी प्रयोग गरिरहेको हुन्छ ।
बिकास निर्माणको कार्य गर्दा यदि बिग्रिए वा भत्किएका कमशल सिमेन्टको प्रयोग गरिएको भन्ने आरोप लाग्छ यसमा के सत्यता छ ?
पडक्ट भनेको एउटा सिस्टम हो । त्यो सिस्टममा विभिन्न टेक्नोलोजीको प्रयोग हुन्छ । रोडा, पानीको क्वालिटी हुन्छ । मूख्य भुमिका खेल्ने भनेको कामगर्ने मान्छेको दक्षताले हो । प्रडक्शन आफैमा दोषी हुँदैन । प्रडकशनलाई दोष लगाउनु गलत हो । कुनै पनि प्रडक्ट टेस्ट, इन्जिनेयरिङ, एक्पोटिज बिना बजारमा जादैन ।
सस्तो सिमेन्ट कमशल हो ?
सस्तो सिमन्ट कमशल हुने होइन । सस्तो सिमेन्टमा राम्रो वर्क मेन सिपको प्रयोग गरियो भने त्यसको पनि राम्रो परफरमेन्स हुन्छ । प्रडक्टको परफरमेन्सका लागिका ममा कस्तो व्यक्ति प्रयोग गरेका छौँ भन्ने कुराले दृढता राख्छ ।
बजारको माग अनुसार उद्योगको अवस्था कस्तो छ ?
अरु सिमेन्टको तुलनामा मारुती सिमेन्ट संस्था आफैमा हेल्दी रहेको छ । साच्चै भन्नुपर्दा यसले मार्केटमा इन्जोय गरिरहेकको छ ।
तस्बीर : महेश्वर केसी/ न्यूज २४ नेपाल
काठमाडौं । नयाँ वर्ष २०७८ को अवसरमा एनसेलका ग्राहकले अब डेटा प्याकको खरिदमा बोनस स्वरुप
चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनाको अवधिमा ६ खर्ब १४ अर्ब बराबरको विप्रेषण भित्रियो
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनाको अवधिमा रु छ खर्ब ४२ अर्ब १४ करोड
नेप्सेले रच्यो नयाँ इतिहाँस, पुग्यो हालसम्मकै उच्च विन्दुमा
काठमाडाैं । धितोपत्र बजारमा शेयर कारोवार मापक नेप्से परिसूचक हालसम्मकै उच्च विन्दुमा पुगेको छ ।